Coronavirus oo ka dabar go’aya Soomaaliya – news
27 September 2020 Sidee u dhacday xil-wareejinta Ra’iisul Wasaaraha?
27 September 2020 Farmaajo oo diiday inuu ka jawaabo Su’aallo la waydiiyay
27 September 2020 RW Rooble oo xilka kala wareegay Mahdi Guuleed
27 September 2020 Ciidanka DF oo faarujiyay degaan muhiim ah
27 September 2020 Khayre xilka maku wareejin doonaa RW Rooble?
Coronavirus oo ka dabar go’aya Soomaaliya
Warbixintii ugu dambeysay ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu sheegay in 184 qof oo ku kala sugan gobolada dalka oo baaritaan lagu sameeyay dhamaantood laga wayay qof qaba Fayruska Koroona.
MUQDISHO, Soomaaliya - Soomaaliya waxaa ka sii dhamaanaya safmarka COVID-19 ee soo gaaray 16-kii Maarso ee sanadkaan, waxaana 48 saac ee la soo dhaafay baaritaannadii la sameeyay la waayay qof qaba cudurka dunida aafeeyay.
Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in 48 saac ee la soo dhaafay guud ahaan dalka Soomaaliya laga waayay qof qaba COVID-19, taasoo ku tusineyso gabaabsiga ama jiritaanka cudurkaan ee gudaha Soomaaliya in uu yaraaday.
In kastoo dowladda si rasmi ah ugu dhawaaqin dhamaadka cudurkaan hadana warbixintii ugu dambeysay ayaa sidaan aheyd: tirada guud ee laga helay ayaa gaartay 3,227, waxaana ka bogsaday 1,728, halka 93 ay u dhinteen. dad badan ayaa aaminsan in tirada intaa ka badan karto.
Dhinaca kale shaqaalihii ka howl geliyay Isbitaalka Martiini oo ahaa xarunta bukaannada dadka laga helay COVID-19 iyo diiwaan gelinta guud ahaan dalka ayaa la fasaxay, waxaana sidoo kale jirin bukaan qaba cudurkaas oo haatan Isbitaalka jiifo.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in dadka ka dhoofaya iyo kuwa ka soo degayo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ay heystaan shahaadada cadeyneyso in aysan COVID-19 qabin ka hor 72 saacadood, islamarkaana xirtaan weji xir si looga gaanshaanto COVID-19.
Sidee u dhacday xil-wareejinta Ra’iisul Wasaaraha?
Warar 27 September 2020 15:58
Xil-wareejinta ayaa dhacday iyadoo Xasan Cali Khayre uu joogo Muqdisho, waxaana lagu tilmaamay arinta mid sharci darro ah, oo baal-marsan dastuurka dalka.
Farmaajo oo diiday inuu ka jawaabo Su’aallo la waydiiyay
Warar 27 September 2020 15:30
RW Rooble oo xilka kala wareegay Mahdi Guuleed
Warar 27 September 2020 12:59
Ciidanka DF oo faarujiyay degaan muhiim ah
Warar 27 September 2020 9:48
Farmaajo ayaa lagu xasuusin doonaa dowladdiisa inay ahayd midii ugu xumayd xoriydda hadalka iyo warbaahinta madaxa-banaan caburisay.
Bajaajlayaasha: Canshuur bixiyaal dhiigoodda la baneystay